पाँच महायोद्धामा एक रुना
नेपालमा कोभिड–१९ को परीक्षणको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्, डा. रुना झा।संयुक्त राष्ट्रसंघको यूएन विमनले कोरोना नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्ने पाँच महिलाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये डा. झाएक हुन्।
विश्व अहिले कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेको छ। संक्रमितको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी दिनरात खटिरहेका छन्। आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर उनीहरूले संक्रमितलाई उपचार सेवा दिइरहेका छन्।यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको यूएन विमनले कोरोना नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्ने पाँच महिलाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुकी निर्देशक डा. रुना झा पनि परेकी छिन्।
झाले नेपालमाकोभिड–१९को परीक्षणको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नेपालको ठूलो र भरपर्दो प्रयोगशाला हो। झाको टोलीले दैनिक छ सयभन्दा बढी परीक्षण गर्ने गरेको छ। टिमले दिनरात मेहनत गरिरहेको छ। अबेरसम्म प्रयोगशालामै बसेर परीक्षण गर्छ।
चीनबाट ल्याएका १ सय ७५ जना विद्यार्थीको परीक्षण झाको टोलीले नै गरेको थियो। उनीसहित टोलीमा १० जना सदस्य थिए। खरीपाटी क्वारेन्टिनमा विद्यार्थी राखेको भोलिपल्ट उनको टोलीले त्यहाँ गएर स्वाब संकलन गरी तीन दिनमा नतिजा दिएको थियो।
त्यहाँबाटैनेपालमा परीक्षणको क्रम सुरु भएको थियो, जो अहिलेसम्म जारी नै छ र आउँदा दिनमा समेत जारी रहन सक्छ। स्वाब प्रयोगशालामा आउने समय निर्धारित नभएकाले अबेरसम्म प्रयोगशालामा बस्नु उनको दिनचर्या बनेको छ। प्रयोगशालामा प्राविधिककाम मात्र नभएर आफ्नो टोलीको व्यवस्थाजनमा पनि झा सक्रिय छिन्। टोलीलाई यातातातको व्यवस्था गर्न होस् वा खानेकुरा,उनी आफैँ अगाडि सर्छिन्। उनी टोली प्रमुख हुन्। टिमको सुरक्षामा उनले कुनै कमी हुन दिएकी छैनन्।
स्वाब परीक्षण गर्नु सामान्य कुरा होइन। सानो गल्ती भएमा उनीहरुलाई पनि संक्रमण फैलिने डर हुन्छ। तर, यस्ता कुराले झाको मनोबललाई कत्तिपनि कम गरेको छैन। उनले आफ्नोे कामलाई प्राथमिकता दिने गरेकी छन्।
आपूm पनि संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना भएकाले झा परिवारसँग भेट्न भने डराउँछिन्। उनलेश्रीमान् र छोरीसँग बस्न छाडेकी छिन्। आमाबुबालाई नभेटेको पनि लामो समय भएको उनी बताउँछिन्। ‘भेट्न मन भएपनि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका कारण भेट्न सकेकी छैन,’ उनी भन्छिन्।
टोलीको मनोबल बढाउन पनि डा. झा उत्तिकै सक्रिय छिन्। उनको यही कलाले गर्दा टिमका सबै जना प्रतिबद्ध हुने गरेका छन्। यस्तो संकटको बेला यति धेरै जोखिमकोे काम गर्नु सामान्य कुरा होइन। तर,झाको साथ र सहयोगले भाइरसविरुद्धको लडाइँमा आफ्नो हौसला बढाएको टोलीका सदस्य बताउँछन्।
नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। परीक्षणको चाप पनि थपिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा उनी र उनको टोलीले गरेको काम सराहनीय छ। झाको कामप्रतिको प्रतिबद्धताले नै उनलाई यूएनविमनले कोरानाविरुद्धको लडाइँमा खटिएका उत्कृष्ट पाँच महिलाको सूचीमा पारेको छ।